Ireo tangoronam-tendrombohitra MAKAY ( Le massif du Makay) - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Ireo tangoronam-tendrombohitra MAKAY ( Le massif du Makay)
Kanto tokoa raha i Madagasikara! Ary tsy manam-paharoa raha ny tontolo misy eto amintsika no hasian-dresaka! andeha ange ho velabelarintsika ny momba ireo tangoronan-tendrombohitra MAKAY e. Isaorana ety am-piandohana ny Nature Evolution izay nanome alàlàna am-pitiavana ny ampiasaina ireo sary nalain’izy ireo.
Manàna drafitra’asa mahafinaritra ary tena mahaliana ihany koa ry zareo ho antsika Mpianatra sy tsirairay avy izay mba liana ny handeha hizaha ny hatsaran’izany Makay izany. Tsidiho ange ny Fanamby (Challenge Makay) 2015-2016 sy ny Mpanatanterak’iraka an-tsitrapo (mission volontaire) 2015-2016 izay samy karankarain’ny Nature Evolution e!
Firy amintsika mamaky ireo ohatra no efa mba nandeha nitsidika izany atao hoe Makay izany? Ary mba manao ahoana moa izy izany? Aiza ho aiza no misy azy ary inona no mba hita any?
Sarotra aloha ny mandainga fa dia mbola vitsy dia vitsy tokoa ireo mahafantatra ny fisian’izany Makay izany. Mety efa betsaka ihany anefa ny naheno fa mbola tsy nahita maso. Ny tangoronam-tendrombohitra Makay dia hita ao amin’ny faritry Menabe miampaka hatrany amin’ny faritra atsimo andrefana iny, manana ny lanjany eo an’ivon’izao tontolo izao, satria laharana faha-11 izy amin’ny fiarovana ny fahamamaron’ny karazan’ireo zava-miaina eo amin’ny toerana iray (« biodiversité »). Mirefy 150km x 50 km izy ireo ary miloko ho mavo mitopy volon-davenona.
Niforona avy amin’ny ahalalàn’ny fikaohan’ny riaka ny tany izy ireo ary dia nanome endrika kanto hafa kely izay ahitana tany lemaka midadasika sy rerinrano mikoriana any an-tsefatsefan’ny tendrombohitra.
Ankoatr’izany dia ahitana karazana zava-maniry sy bibidia maro isan-karazany ihany koa any. Ary izany no anisany hilaina ny tokony hitandrovantsika azy ireny. Raha atao bango tokana ny tokony hiarovana azy ireny dia satria harena voajanahary izy ireny ary:
ny varika/ gidro dia tafiditra ao anatin’ny sokajin’ireo harena voajanahay miaina maneran-tany (patrimoine mondial vivant) ;
tombony amin’ny toe-karena koa izy amin’ny ahalàlan’ny fizahantany ;
ny fandalinana nazy ireny ihany koa dia mampitombo ny fahalalana momban’ny fahamamaron’ny karazan’ireo zava-miaina eo amin’ny toerana iray (« biodiversité »).
Liana ve ianao hoe inona no tokony ho atao hiarovana ny Makay sy ny zava-miaina misy ao aminy toy ireo gidro/varika ? Ary ahoana ny fomba ahatongavana any Makay?
Ny fomba voalohany ahafahana miaro ny varika/gidro sy ireo zava-manan’aina hafa maro isan-karazany , dia ny fiarovana ny fonenany izay matetika dia tafiditra ao amin’ny antsoina hoe « Système d’Aire Protégée de Madagascar (SAPM) » izany hoe toerana arovana ary tokony ho anisan’izany ny Makay. Tsy vitan’ny fiampidirana azy ho ao amin’ny SAPM anefa ny fiarovana ny Makay fa mila tsara tantana sy mila loharanon-karena (ressources) ihany koa toy ny fizahan-tany ohatra.. Mba ho tanteraka izany dia hoe mila paik’ady hikojana ny toerana. Inona ny vahaolana ? Hatao toerana voaro tantanan’ny fanjakana ve sa ny tsy miankina ? Rehefa milamina ny drafitra sy ny paik’ady mba hisian’ny filaminana amin’ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana dia tokony ho mety dahalo. Ny tsy azo hadino kosa anefa, na inona na inona fandehany rehefa ho lasa toerana voatokana vaovao ny Makay, dia mila manao fampifanerana ny fampiasam-bola amin’ny tontolo iainana (Mise en Compatibilité des Investissement avec l’Environnement) ary tsy latsa-danja amin’izany ny sosialy, ny fanka-kevim-bahoaka (audience publique) sy ny fampifanarahana ny fiarovana ny tontolo iaianana sy anto-piveloman’ny mponina eny antoerana.
Itsy etsy ambony itsy no anisan’ny làlana mankany! Mahasondriana ery! Mandeha amin’ny làlam-pirenena RN 35 iny ianao dia eny Malaimbady no mivily. Misy fidirana anankiroa ny mankany : Malaimbady na Beroroha ihany koa izay amoron’ny renirano Mangoky. Dian-tongotra tsy misy ohatr’izany ny any ary izay no antony hilaina mpitondra entana sy mpitari-dia mba hialana amin’yn mety ho fahaverezana. Mandritra ny 9 andro eo ny famakivakiana an’i Makay ary mahatratra hatramin’ny 7-8 ora ny dia tongotra mila hatao isan’andro ankoatry ny andro iray manontolo izay eny ambonin’ny lakana eny amin’ny reniranon’i Mangoky. Tafavoaka any amin’ny tangoronam-tendrobohitra iray hafa eny Isalo ny dia izay any amin’ny làlàm-pirenena RN7. Mila fiomana betsaka ny mankany ary mila fiara tsy mataho-dalàna (4X4) amin’ireo faritra tonga ny fiara. Raha te ho any ianao dia mila manana fotoana malalaka ihany koa , eo amin’ny tapa-bolana eo. Koa ndao ary e! Iza no sahy?!
About Caroll Razafimahaleo
Razafimahaleo Caroll Mpiandraikitra momba ny tontolo iainana ny tenany ary efa ho dimy taona izao no nanatontosan'izany asa izany. Amin'ny alalan'ny fanaovana fanadihadiana ny mety ho fiantraikan'ny fahasimban'ny tontolo iainana ary ny fanaraha-maso ireo drafitra sy fomba entina hitantana ny tetik'asa momba ny tontolo iainana no tena anisan'ny imasony. Nianatra momba ny toekarena , sokajy toekarana iombonana sy ny tontolo iainana teny amin'ny anjery manontolon' i Antananarivo ny tenany.
View all posts by Caroll Razafimahaleo →